Ogaden News Agency (ONA) – Ururka Haweenka S.Ogadenya ee Minnesota oo shir muhiim ah isugu yimid
Ururka Haweenka S.Ogadenya ee Minnesota oo shir muhiim ah isugu yimid
Posted by ONA Admin	/ June 18, 2012
Waxaa taariikhdy markay ahayd 06/16/2012 shir ballaadhan isugu yimid
Hooyooyinka S.Ogadenia ee gobolka Minnesota cariga Maraykanka. Shirka oy ka soo qaybgaleen hooyooyin tiro badan ayay kaga wada tashanayeen haweenka Ogadenya ee Minnesota kor u qadada kaalinta ay dumarku ku leeyihiin halganka shacabka Somalida Ogadenya.
Shirka oo arima badan lagu gorfeeyay ayaa waxaa ka hadlay oo ku soo dhaweeyay shirka Gudoomiyaha ururka haweenka S.Ogadenya ee Minnesota hooyo Xaliima xaaji. Marwo Xaliima Xaaji ayaa si fiican ugu tiig tiigsatay inay haweenka u guntadaan sidii horayba looga bartay kor u qaadida halganka. Waxayna sheagtay inay si deg deg ah u soo dhisi doonto gudigii la shaqayn lahaa, halkaasoo ay dhaman hooyooyinkii shirka ka soo qaybgalay ay si fiican us oo dhaweeyeen una ballan qadeen inay la shaqayn doonaan.
Waxaa khadka telefoonka soo galay ku xigeen hogaanka HAAB mudane Abdiqaadir Gamaadiid oo warbixin meelo badan taabanaya halkaas ka soo jeediyay isagoo uga xogwaramay gudaha iyo hawlaha ka jira iyo habasami socodka halganka.Wuxuu yididiilo badan ka muujiyay mudane gamaadiid inay tahay maanta maalintii ugu wanaagsanayd ee halganka shacabka S.Ogadenya uu soo maro isagoo ka xogwaramay jileeca gumaysiga Itobiya maanta taasoo cadayn ay u tahay buu yidhi kaligii taliye Zanawi oo ka cabsanaya inuu Adisababa dibadda uga boxo, sababtoo dhawaaq ayaa meel walba kaga socda sida wixii ka qabsaday tagitaankiisii USA iyo South Africa.
Shirkaa oo ahaa mid aad u heersareeya ayaa guul ku soo gabagaboobay iyadoo go’aano dhaxalgal ah ay ku qaateen Hooyooyinkii shirka isugu yimid.